Myanmar.direct.news : News & newspapers from Myanmar. Press review
Direct.news > Asia > Myanmar
Direct news from Myanmar. Newspapers, Videos & Local news
Latest news from Myanmar, in Myanmar newspapers
DVB | Global New Light of Myanmar | Mizzima | Narinjara | The Irrawaddy |
7 Day Daily | BNI | EBO Myanmar | Eleven | Frontier Myanmar | Myanmar Business Today | Myanmar Times | The Voice |
While we still don’t have medicines or vaccines to prevent and cure COVID, we will need to change some aspects of (...)
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi wrote on her Facebook page yesterday that it would be necessary to change some aspects of our lifestyle even if we could not change society asawhole in accordance with the requirements while we still don’t (...)
Global New Light of Myanmar -9July 2020
An online meeting was held between the International Liaison Department of the Central Committee of the Communist Party of China (IDCPC), government of Yunnan Province, and Mandalay Region government at 1:30 pm yesterday. In the first session of (...)
Deputy Commander-in-Chief of Defence Services Vice Senior General Soe Win joinedavirtual meeting for discussing the 21st ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting and the 30th ASEAN Armies Rifle Meeting yesterday. The Vice Senior General and (...)
Union Minister U Kyaw Tin participates in 13th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting via Video (...)
Union Minister U Kyaw Tin joins the 13th Mekong-Japan Foreign Ministers’ Meeting on9July. PHOTO: MNA Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin participated in the Video Conference of the 13th Mekong-Japan Foreign Ministers’ (...)
Union Minister for Health and Sports Dr Myint Htwe heldavideoconference with the relevant officials of regions and states yesterday morning about challenges in the fight against COVID-19 in respective areas. At the meeting, the Union Minister (...)
Union Minister U Thein Swe addresses ILO Virtual Global Summit on COVID-19 and World of Work via video (...)
Union Minister for Labour, Immigration and Population U Thein Swe participated in the videoconference of the Constituents’ Day event, dubbed, ‘ILO Virtual Global Summit on COVID-19 and the World of Work’ yesterday at 4:30 pm from Nay Pyi Taw. At (...)
By Nyein Nyein Chin State drew three domestic investments over the four years of the incumbent government, despite zero foreign direct investments in the state according to the Directorate of Investment and Company Administration (DICA). Those (...)
By Nyein Nyein More than 3,300 enterprises have been granted over K100 billion from the Coronavirus Fund in the past four months, as per the data ofacommittee to remedy the economic impacts caused by the pandemic. The committee has been (...)
A ten-day drought in Magway Township is likely to damage the sesame plants, according to the local sesame growers. “The 45-day-old sesame plants are being faced with the problem of lack of rain this year. Now, it is the blossoming time but we (...)
The number of people displaced by river bank erosion has increased this year in Magway Region when compared to that of last year, according to the Disaster Management Department. Although only about 200 households were displaced by the river (...)
ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်းနှင့် ရွှေဈေး
ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့အတွက် ငွေလဲလှယ်နှုန်းထားတွေကတော့ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာကို ၁၃၆၈.၆ ကျပ်၊ ၁[...] The post ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့ ငွေလဲနှုန်းနှင့် ရွှေဈေး appeared first on DVB.
DVB -9July 2020
တရားမဝင် မြန်မာ ၁၂ ဦးနှင့် ဗီဇာသက်တမ်းကုန် တရုတ်နိုင်ငံသား ၃ ဦးတို့ ထိုင်းရဲ ဖမ်းဆီး
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာ့ခ်ခရိုင်ထဲမှာ တရားမဝင် ဝင်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၂ ဦး နဲ့ နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာသက်တမ်းကုန် တရုတ်နိုင်ငံသား[...] The post တရားမဝင် မြန်မာ ၁၂ ဦးနှင့် ဗီဇာသက်တမ်းကုန် တရုတ်နိုင်ငံသား ၃ ဦးတို့ ထိုင်းရဲ ဖမ်းဆီး appeared first on (...)
နောင်ချိုတွင် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၄,၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိ
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ နောင်ချိုမြို့နယ်မှာ ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၄,၀၀၀ လောက် တန်ဖိုးရှိ ဘိန်းဖြူနဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ[...] The post နောင်ချိုတွင် ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း ၂၄,၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိ appeared first on (...)
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လွိုင်လင်မြို့နယ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ဇူလိုင် ၅ ရက်ကစပြီး quarantine ဝင်နေတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှပြန်လာသူ[...] The post ထိုင်းနိုင်ငံက ပြန်လာသူ ၂ ဦး လွိုင်လင် quarantine စင်တာမှ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေ appeared first on (...)
တောင်ကိုရီးယာနှင့်အမေရိကန် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ဆွေးနွေး
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဒုဝန်ကြီး စတက်ဖန်-ဘီဂန်နဲ့တောင်ကိုရီးယား ထိပ်တန်းလုံခြုံရေး အကြံပေးတို့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်က အစည်းဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်ဒုဝန်ကြီး [...] The post တောင်ကိုရီးယာနှင့်အမေရိကန် ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အရေး ဆွေးနွေး appeared first on (...)
ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်နေသည့် ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရတော့ မည်
သြစတြေးလျမှာ ပညာသင်နေတဲ့ ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားတွေကို ဝန်ကြီးချုပ် စကော့် မောရစ်ဆင်က ဇူလိုင်လ ၉ ရက်မှာ အမြဲနေထိုင်ခွင့်လမ်းကြောင်း[...] The post ဩစတြေးလျတွင် ပညာသင်နေသည့် ဟောင်ကောင်ကျောင်းသားများ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရတော့ မည် appeared first on (...)
မက္ကဆီကိုနှင့်အမေရိကန် သမ္မတနှစ်ဦး ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ
မက္ကဆီကိုသမ္မတ လိုပက်ဇ်-အိုဘရေဒိုဟာ ဇူလိုင်လ ၈ ရက်က အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်စွမ်းအင်ကဏ္ဍ[...] The post မက္ကဆီကိုနှင့်အမေရိကန် သမ္မတနှစ်ဦး ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံ appeared first on (...)
ဗြိတိန်အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာအတွက် ပေါင်စတာလင် ဘီလီယံ ၃၀ သုံးမည်
ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ အကြပ်အတည်းကို ဖြေရှင်းဖို့ ကုမ္ပဏီတွေက ခွင့်ပေးနားခိုင်းထားတဲ့ လုပ်သားတွေကို ပြန်ခေါ်နိုင်ရေး ပေါင်စတာလင် ဘီလီယံ[...] The post ဗြိတိန်အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာအတွက် ပေါင်စတာလင် ဘီလီယံ ၃၀ သုံးမည် appeared first on (...)
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့မှာ မူးယစ်ဆေးဝါးမှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံသားတဦး ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့အချိန် ဇူလိုင် ၉ ရက်နေ့[...] The post မူးယစ်မှုဖြင့် ထောင်ကျနေသည့် တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ဦး ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးက ထွက်ပြေး appeared first on (...)
လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်စေသည့်စကားများ ဆက်သွယ်ရေးဘက်က ဖယ်ရှားရန် သမ္မတပြော
အမုန်းစကားတွေ၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ထိခိုက်စေတဲ့ စကားတွေနဲ့ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်စေတဲ့ စကားတွေကို ဆက်သွယ်ရေးဘက်က ဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ[...] The post လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးပဋိပက္ခ ဖြစ်စေသည့်စကားများ ဆက်သွယ်ရေးဘက်က ဖယ်ရှားရန် သမ္မတပြော appeared (...)
The Irrawaddy -9July 2020